असन्तुष्टिले विष्फोटको रुप लिन्छ - RoadMapNews
RoadMap News	प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन २४, २०७७ समय: ९:३१:४८
हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई विधि, पद्धतिसंगत सञ्चालन गर्ने चुनौतिपूर्ण विषयलाई यतिबेला हामीले कामको केन्द्रभागमा राखेर अगाडि बढेका छौँ । सरकार पार्टी निर्णयको अधिनस्थ हुन्छ । पार्टीका संस्थागत निर्णयका आधारमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड छ ।
विगत ६–७ महिनादेखि पार्टीमा चलिरहेको विवादले केही समाधानको रुप लिने आशा हामीले राखेका थियाँै । सचिवालय बैठकले विवाद समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलको सुझावलाई स्थायी कमिटी बैठकले पारित ग¥यो । त्यसपछि केही कुरामा सुधार होला, पार्टी अब ठीक लिगमा अगाडि बढ्ला भन्ने हाम्रो आशा हो । त्यसआधारमा अब काम होला भनेको त, फेरि प्रदेश ५ को राजधानी कहाँ राख्ने ? नाम के हुने भन्ने कुराको सहमति भयो भन्ने कुरा एकैचोटि पत्रिकामा आएपछि थाहा भयो । पत्रिकाबाट हामीले थाहा पाउनुपर्ने ? मानिलिउँ, मैले यसको विरोध गरेँ भने के हुन्छ ? विरोध गर्ने मेरो अधिकार त छ । म निर्णय गर्ने टपमोस्टमध्येको मान्छे हुँ । निर्णय ठीक होला, मेरो राय पनि त्यही होला । तर, छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न विधिको हो । तपाईं घरमा आउनुभयो, राम्रो कुरा भयो । तर, तपाईं ढोकाबाट नआएर झ्यालबाट आउनुभयो भने के हुन्छ ? आउने कुरामात्रै महŒवपूर्ण हुँदैन, तरिका पु¥याउने कुरा पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । प्रदेश ५ को निर्णय राम्रो ठान्ने म पनि हुनाले ठीकै छ । तर, तरिका भएन नि † एउटा जुम मिटिङ गरेर कुरा गरेको भए हुन्थ्यो होला ।
पार्टी एकतामा पनि समस्याहरु पैदा भएका छन् ।
पूर्वएमालेको कुरा गर्ने हो भने हामी पार्टी एकताका धेरै चरण पार गरेर आजको अवस्थामा आएका हौँ । त्यसैले हाम्रा निम्ति एकता नयाँ प्रयोग हैन । नयाँ प्रयोग भइदिएको भए यो एकता के–के न हो भन्ने हुन्थ्यो । यो एकतामा पनि हामी पहिला विधिमा प्रवेश ग¥यौँ । सहमतिका आधारहरु तयार पा¥र्यौँ । त्यसो गर्दा पार्टी एकताका कुनै पनि प्रक्रियामा समस्या खडा भएन । तर, समस्या कहाँ व्यक्तिले खडा गरे । कोही सन्तुष्ट, असन्तुष्ट भए होलान् । त्यो व्यक्तिको कुरा हो । तर, पार्टी एकताको काम ‘स्मुथ्ली’ सम्पन्न भयो । तर, यसपटक त्यस्तो किन भएन भने, विधिमा टेक्ने काम भएन । शुरु शुरुमा त विधिमा टेकियो । जस्तो कि, पूर्वएमालेको हकमा केन्द्रीय कमिटी गठनको कुरामा विधिमा टेकियो । सचिवालय र स्थायी कमिटी गठन गर्दासम्म त्यो भएको देखियो । तर, त्यसपछि समस्या खडा हुन थाल्यो । केन्द्रीय कमिटीको एकता गर्दा पनि पहिलो गाँसमा ढुंगा लाग्यो । सहमति भयो, निर्णय भयो, तर सर्कुलर जारी गर्ने बेलामा मनपरि भयो । यसले विश्वासको ठूलो संकट खडा गरेको छ । संसारमा त्यस्तो कहीँ पनि हुँदैन कि, निर्णय एउटा, सर्कुलर अर्को ।
त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई कारवाही हुनुपर्छ । तर, यहाँ विधि, विधानको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरु आत्मबोध गर्ने अवस्थामा छैनन् । केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने भनेर तय भएको व्यक्तिको नाम हटाइयो । छलफल नै नभएका विषय राखियो, जस्तो कि, आमन्त्रित सदस्य । यदि, आमन्त्रित सदस्यको व्यवस्था नै गर्नु थियो भने त्यो कुरा विधान बनाउने बेलैमा छलफल गर्नुपथ्र्यो । तर, कहीँ छलफल भएन । त्यसैले, त्यो पदको सिर्जना गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने त्यसको मापदण्ड के राख्ने ? को–को व्यक्ति त्यसनिम्ति उपयुक्त हुनसक्छन् ? अनि, त्यसपछि बल्ल को–को व्यक्ति हुनसक्छन् भन्ने कुरा आउँछ । तर, कुनै पनि प्रक्रिया पार नगरी सर्कुलरमा धमाधम लेखेर पठाइयो । शुरुदेखि नै विधि र पद्धतीको उल्लंघन गर्ने काम भयो । यस्तो गतिछाडापनलाई रोक्ने काम भएन । मेरो लडाइँ भनेको त्यही कुरामा हो । अझै पनि रियलाइज भएको छैन, सुधार गर्ने काम भएको छैन । र, म यो विषय छोड्दिनँ ।
एउटा पार्टी जब विचारले वैज्ञानिक हुन्छ, यसका सबै नीति र विधिहरु पनि वैधानिक आधारमा उभिएका हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मापदण्डका तय गर्ने आवश्यकता पर्दछ । मेरो, तेरो भनेर हेर्न पाइँदैन । उसको योग्यताको जाँच गरिन्छ । लेखिएका सबै मापदण्ड पूरा गरेको छ, छैन भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । तर, यी कुनै पनि विधि प्रयोग गरिएको छैन । त्यही कुरा पछि गएर प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी बनाउने, जिम्मेवारी तय गर्ने कुरा भयो– त्यहाँ पनि यस्तै क्रम देखा पर्न थाल्यो । हामीले चार सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीको कुरा तय गर्ने भनेका थियौँ । किनभने, पूर्वमाओवादीको हजारौँ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । त्यो संख्या सानो गर्नु जरुरी थियो । हामीले दुई सय भन्दा बढी नगरौँ भनेका थियौँ । पूर्वएमालेकै केन्द्रीय कमिटी दुई सय सेरोफेरामा रहेको हुनाले त्यसैलाई आधार बनाएर चार सय ४१ तय भयो । त्यसमा पूर्वएमालेले दुई सय ४१ सदस्य र बाँकी पूर्वमाओवादी केन्द्र भन्ने सहमति भयो । यसो गर्दा पूर्वएमालेका पुराना केन्द्रीय सदस्य सबै परे । ४१ जना थप्दा मापदण्ड बनाउनुपर्ने कुरामा धेरै कचकच भइसकेपछि सहमतिसम्म भयो । भएकालाई कायम राख्ने, सिनियरलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने आधारमा जाऔँ भनियो । बल्ल–बल्ल सर्कुलर जारी भयो । तर, तल गएर सर्कुलर पलना भएन । पालना नगर्नेलाई कुनै कारवाही पनि भएन । सर्कुलरको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई त कारवाही पो हुनुपर्छ † विधानमा एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी भनिएको छ । तर, एउटै व्यक्तिलाई एक होइन, अनेक जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यकारी जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । कसैलाई भ्याई न भ्याई छ, कसैलाई कामै छैन । यही बिडम्बनाका विषयमा हामीले कुरा उठाउँदै आएका हौँ ।
यसरी पार्टीभित्र एउटा, दुई गरेर असन्तुष्टिहरु बढ्दै–बढ्दै गएपछि विष्फोट हुन्छ र पार्टी चल्दैन । यो पार्टी चलाउने लक्षण होइन, यो पार्टी डुबाउने, सिध्याउने लक्षण हो । पार्टी चलाउने व्यक्तिले जिम्मेवार ढंगले चल्न जान्नुपर्छ । पार्टीको अधिनमा सबै रहन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । कसैकसैले ठानिरहेका छन् कि, पार्टी अध्यक्ष नै महान संस्थ हो । त्यसो होइन । अध्यक्ष भनेको संस्थाको मातहतको एउटा प्रमुख व्यक्ति मात्रै हो । यो कसैको निजी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी पनि होइन । मन परेको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पाइने होइन । समाजका सबैभन्दा बद्नाम मान्छे, आफ्ना प्यारा र नेतालाई गालीगलौज गर्न माहिर मान्छेलाई सरकारी नियुक्त दिन थालियो भने के हुन्छ ? अहिले त्यही भइरहेको छ । आफूखुशी जे पनि गर्न पाइँदैन । जति पनि नियुक्ति भइरहेका छन्, त्यसमा उसको विशेषता हुनुपर्छ, माधव नेपाल र प्रचण्डको खाइरो खन्ने । त्यस्तो तरिका अपनाउन थालिसकेपछि पार्टीभित्र विद्रोह पैदा गर्छ । यस्तो स्थिति पैदा गर्छ सम्बन्ध नै कटुतापूर्ण हुन पुग्छ । सम्बन्ध नै कटुतापूर्ण हुन थालिसकेपछि, विधिको पलना नगर्न थालेपछि, यस्तै गलत तरिका अपनाउन थालिसकेपछि पार्टी सहज स्थितिमा चल्दैन ।
यस्तो लाग्छ कि, कतै कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै सिध्याउने खेल त भइरहेको छैन ? कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने नाम नै कसैको लागि घाँडो त भइरहेको छैन ? कम्युनिष्ट पार्टीलाई बद्नाम गर्न कोही लागिपरिरहेको त छैन भनेर चिन्ता लागिरहेको छ । यत्रो दुःख गरेर हामीले यो बिन्दुसम्म पु¥याएको पार्टीलाई सिध्याउन खोजिएको त होइन ? अनि, गफ हाँक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई म चुनौति दिन चाहन्छु, मसँग एक–एक रेकर्ड छन्, तिनीहरुले के–के गरेका छन् भन्ने कुराको । इतिबृत्ति सबै मलाई थाहा छ । मसँग धेरै गफ नहाँके हुन्छ । म ती सबै तत्व, गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरुले भोलि के परिणाम हुन्छ ? विचार गरेर चल्नुप¥यो । म कसैसँग डराउनेवाला छैन । राम्रो गर्ने सबैलाई मेरो सम्मान, प्रोत्साहन रहन्छ । बेठिक हुँदा पनि म मौका दिन्छु र सुधार गर्नुस् भन्छु । तर, गल्तीलाई पहिला महसूस त गर्नुप¥यो नि † अनि सच्याउनुपर्छ । पहिला कुरा त सुन्नुप¥यो नि † पहिलो श्रवणशक्ति, दोस्रो सहनशक्ति, तेस्रो विश्लेषण शक्ति र चौथोमा ग्रहणशक्ति त हुनुप¥यो नि । पहिला तपाईं सुन्नै चाहनुहुन्न, सहन सक्नुहुन्न, विश्लेषण र ग्रहण गर्न चाहनु हुन्न भने आन्दोलनलाई नोक्सान हुन्छ, व्यक्तिलाई पनि नोक्सान हुन्छ । हाम्रो चाहना, चिन्ता एउटै हो, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणसहित समाजवादको यात्रा । समाजवादको उद्देश्यलाई साकारा पार्ने हाम्रो संकल्प पूरा गर्न यी त्रुटीहरु सच्याउनुप¥यो ।
प्रधानमन्त्री क.केपी ओलीको छलकपटपूर्ण कार्यशैलीले नेतृत्वमा नै साथीहरु विरक्त हुनुहुन्छ । कतिपय कुरा व्यवहारले दाँज्नुपर्छ । सीधै एउटा निश्कर्षमा पुग्नुहुँदैन । कसैले सुनाउनेबित्तिकै प्रभावित हुनुहुँदैन । मेरो त्यस्तो बानी छैन । सुनाउनेबित्तिकै वेवास्ता पनि गर्नुहुँदैन । तर, त्यसैलाई विश्वास गरेर चल्नु पनि हुँदैन । कपितय कुरा कुन स्रोतबाट आएको छ भन्ने आधारमा कुरा बुझ्नुपर्छ । भेरिफाई गर्नुपर्छ । म भेरिफिकेशनको ठाउँ दिने गर्छु । धेरैपटक, धेरैतिरका कुरामा भेरिफाइड भएपछि विश्वासको मात्रा बढ्छ । तर, त्यसको निम्ति पनि म स्पेश दिन्छु । कहिलेकाँही अनेकखालका तत्व गलत कुरामा भड्काउन क्रियाशील हुन्छन् । म चाहन्छु कि, विश्वासको वातावरण कायम होस् । विगतमा पनि नेताहरु बीच त्यस्तो समस्या भयो । तर, त्यसबेला वर्कएवल रिलेशन (कामकाजी सम्बन्ध) रह्यो । त्यसो गर्नमा म आफैँ तल्लिन भएँ । नेताहरुको बीचको सम्बन्धमा ठूलो धाँजा फाट्दा पनि मिलाउने काम मैले नै गरेँ । नेताहरुलाई म एउटा छोर वा अर्को छोरमा (दुई किनारमा) राखेर हेर्न चाहन्नँ । महान नेता वा महान शत्रु कोही होइनन् । सबैका राम्रा पक्ष र कमजोरी हुन्छन् । इमान्दार मान्छे छ भने कमजोरी स्वीकार्छ, सच्याउँछ । तर, धर्तिमा इमान्दारमात्र छैनन्, बेइमान पनि छन् । बेइमानहरुको संख्या कम छ । बेइमानहरुको संख्या बढी भएको भए धर्ति नै चल्ने थिएन । त्यसकारण, इमान्दारहरुको संख्या र बेइमानहरुको संख्या पनि कम छ । बढी संख्या छ, बीचवालाका मान्छेहरुको छ । ती मान्छे टेष्टेड हुनै बाँकी छन् । तिनीहरु बेइमान हुन् कि इमान्दार हुन् भन्ने कुरा अहिल्यै कसरी भन्नु ? किनभने, तिनीहरुलाई जाँच्नै बाँकी छ ।
साथीहरु पार्टीमा काम पाइएन भन्ने गुनासो लिएर आउने गर्नुहुन्छ । कामको बाँडफाँट र जिम्मेवारी तोक्ने कुरा पनि व्यक्तिवाद हावी हुँदा पार्टी अस्तव्यस्त भएको छ । पार्टीभित्रका केही व्यक्तिलाई कामको आफल–ताफल छ । पटक–पटक एउटा व्यक्तिले अवसर पाएको पायै छ । अर्कातिर यही पार्टीमा त्यत्रा योग्य साथीहरु छन्, आन्दोलनमा योगदान दिएका साथीहरु छन् । तिनीहरुको चाहिँ पूरै वेवास्ता छ । यसरी त सिंगो संस्था (पार्टी) चल्दैन । एउटा सानो गुट चल्ला । गुटमा पनि भोलि संकट आउला † गुटका मान्छे दास भएका हुनाले धेरै संकट टार्ने भनेको लोभले हो । फेरि पनि लोभ देखाएर तह लगाइएला । तर, पार्टी नामको चिज यसरी चल्दैन । पार्टी नै चलेन भने आन्दोलन सकिन्छ, संस्था सकिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने चिज इतिहासको गर्तमा जान्छ ।
पार्टी नचलेर हाम्रो पार्टीका साथीहरुलाई अरु पार्टीले तानिरहेका छन् । मान्छे निराश भएर आफैँ अरु पार्टी रोज्न थालेका छन् । कतिपय जिल्लामा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार भए, कामको जिम्मा नदिएका कारणले साथीहरु बिचलित भएका छन् । देशभरिका साथीहरुमा निराशा बढेको भन्ने सूचनाहरु आइरहेका छन् । यी कुराले हामीलाई चिन्तित बनाउनुपर्ने, पोल्नुपर्ने हो ।
हामीले सरकार सञ्चालनका निम्ति एउटा मापदण्ड, विधि बनाऔँ भनेका हौँ । सरकारलाई कसरी लोकप्रिय बनाउने भन्नेबारेमा सचिवालयका १० वटा बैठक, स्थायी कमिटीका दुई–चारवटा बैठक, केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बसेर अगाडि जाऔँ भनेका हौँ । एक हप्तासम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर सबैले बोल्ने मौका दिइँदा के हुन्छ ?
अहिले पनि हामीले यसलाई मेकअप गर्न पायौँ भने क्षति न्युन गर्न सकिन्थ्यो । किनभने, स्थानीय तहको चुनाव आउन लागेको छ । त्यसलगत्तै संघीय र प्रदेश संसदको चुनाव हुने बेला आउँदैछ । त्यसका निम्ति पार्टी बलियो हुनै पर्छ । कायकर्ताहरको मनोबल उच्च हुनै पर्छ । इमान्दार कार्यकर्ताको जमात बढाउनुको सट्टा जनतामा विस्थापित भएका, बद्नाम भएकाहरुको जमातलाई अगाडि बढाउन थालियो भने यिनैले पार्टीभित्र घुन–पुत्लाको काम गर्छन्, पार्टी सिध्याउँछन् । पार्टी सदस्य भएका मान्छेलाई कमिटीमा ल्याउने, विभिन्न ओहोदामा ल्याउने गर्नुको सट्टा पार्टीभित्रै गन्हाएका मान्छेलाई अगाडि ल्याउने, भ्रष्टाचारमा मुछिएका मान्छेलाई अवसर दिने, असल–इमान्दार मान्छेहरुले चित्त दुखाइरहेका छन् ।
क.केपी ओली एकदमै सानो दृष्टिकोण भएको, गुटगत चिन्तन भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ त्यसबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । त्यसपछि हामीले आशा ग¥यौँ कि, क. प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पूरै पार्टीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । उहाँले पनि क.केपीकै तरिकाले सानो गुटको प्रतिनिधित्व गर्न थाल्नुभयो वा पूर्वमाओवादीको मात्रै नेतृत्व गर्न थाल्नुभयो भने फेरि दुई अध्यक्षमा फरक हुँदैन । यस्तो कुरामा गुनासो नआओस्, आलोचना नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
जनताले पार्टी र सरकारको निष्पक्ष ढंगले मूल्यांकन, विश्लेषण गर्छन् । मेरो मान्यता हो कि, लागिरहनुपर्छ । हार भयो भनेर दिक्क मान्ने कुरा हुँदैन । पार लागेन भनेर निराश हुनुहुँदैन । निराशालाई चिरेर अगाडि बढ्नु नै जीवन हो । म हरेश नखाने मान्छे हुँ । हामी आफ्नो निम्ति मात्रै होइन, नेपाली जनताको निम्ति र भावी पुस्ताको निम्ति यो सबै गरिरहेका छौँ । नयाँ पुस्तामा यसबारेमा बढी चासो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । माओले भन्नुभएजस्तो हामी डुब्दै गरेको घामजस्तै हौैँ । हामी हाम्रो समयमा उदाउँदो सूर्य थियौँ । हामीले चम्काइदियौँ । अहिले घाम तापेर आएका मान्छेहरु गफ बढी गरिरहेका छन् । यो काम गर्ने भनेको हामी नेपाली कम्युनिष्टले नै हो । आँट, संकल्प, धैर्यता र बुद्धिमत्ता छ भने जस्तोसुुकै चुनौतिलाई पार गर्न सकिन्छ । संकटलाई सामना गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं सिडिओकालागि सिंह र रिजालमध्ये…
एसएसबीको संलग्नतामा दार्चुलाको तुइन घटना…
दल विभाजनमा सहभागी नहुन एमालेको…
गठबन्धनका नेतालाई मन्त्री छान्न धौ…
पौडेल पक्षको मागले देउवालाई तनाव
दल विभाजनमा सहभागी नहुन एमालेको उर्दी
गठबन्धनका नेतालाई मन्त्री छान्न धौ धौ
प्रदीप नेपालले छाडे माधव नेपालको साथ
यस्ता छन् माधव नेपालले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाएका आरोप